Apple tarisa pakati pevanotengesa zvakanyanya ne jewelers | Ndinobva mac
Kunyangwe isu tisina data pamusoro pekutengesa kweApple zvinhu, uye kunyanya iyo Apple Watch, vaongorori vanofungidzira kuti iyo Apple Watch chichava chimwe chezvinhu zvinotengeswa zvakanyanya mukota inoIsu tinotarisa pazvinhu zvinotengwa zvakanyanya muzvitoro zvezvishongo.
Ndokunge, mhete zhinji, zvishongo, pendende kana wachi uye zvimwe zvigadzirwa zvakajairwa kupa pamazuva aya, zvinogona kutsiviwa neApple Watch, sechipo chenyeredzi yemwaka weKisimusi. Dhizaini nyowani yeApple wachi, chimwe chinhu chakafanana nemamwe mamodheru ekuona atinoona mumashopu ezvitoro zvine hunyanzvi, inogona kuve yekukumbira.
Apple inofamba kutsvaga wechipiri mutengesi weApple Watch uye vadzivise makuru ekuputsa sitoko pamazuva aya, vanobvumirana nevanoongorora ava. Mutengo weApple wachi uri mukati memahara anogamuchirwa kuti ugadzire chipo chakanaka panguva yeKisimusi, mune iyi nyaya iPhone iri kumberi kure nekuda kwekuwedzera kwemitengo yavo mumakore achangopfuura.
Mukuwedzera kune dhizaini, mune yekutenga sarudzo inokosheswawo kuti iyo itsva Apple Watch iri kuwedzera kuzvimirira kune iyo iPhone uye inobvumidza kuita mamwe mabasa, pamwe nekuwana kuzvitonga kuzhinji. Sekureva kwevaongorori, fungidziro dzinotaura zvimwe 10 mamirioni emakota kutengesa kweApple Watch pasi rese. Aya manhamba anomiririra 10% kupfuura kutengeswa kwegore rapfuura. Maererano Cascend Dziviriro.
Tinotarisira kuti Apple inotengesa angangoita mamirioni gumi emawatch mumwedzi waZvita, uye inogona kuverengera madhora anosvika mabhiriyoni mapfumbamwe mukutengesa kwegore rino. Apple: vatengi vatove muApple ecosystem vachachengeta iyo Apple Watch kuti ishandise zvakabatana mabasa
Zvakare muongorori wezvehupfumi waDeloitte, Daniel Bachman, yakatsanangurwa maererano neApple Watch:
Chinhu chinotonhorera chekuisa pasi pemuti weKisimusi iApple Watch, kwete hazvo wachi yemuno yekushongedza.
Sezvo Apple isingataure nezve data rekutengesa rewachi, vaongorori vanovimba nemufananidzo unoshandiswa neApple kuwachi. chikamu «zvimwe» kwaunowana iyo Apple TV, HomePod uye ikozvino Apple Watch.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Vaongorori vanofungidzira Apple Watch kutengesa yakakwira yezvishongo
Runyerekupe runoratidza kuti Movistar naMasMovil vanorondedzera eSIM yavo yeApple Watch Cellular
Aya ndiwo ese maapplication anoshanda neyerima modhi